Xidhmada iyo Warshadda Qalabka - Xirmada Shiinaha iyo Soo -saareyaasha Qalabka iyo Alaab -qeybiyeyaasha
Waxaan awoodnaa inaan u fidinno macaamiisheenna adeegga hal joogsi. Qalabka iyo xirmada waa 2 arrimood oo muhiim ah si badeecaduhu u noqdaan kuwo aad u fiican oo soo jiidasho leh. Xirmooyin badan & ikhtiyaarrada alaabada ayaa la siin karaa. Baakadaha iyo qalabka kala duwan waxay shayga siiyaan muuqaal kala duwan. Gaar ahaan xirxirida gaarka ah & alaabada, waxay kala soocdaa summadaada. Marka laga reebo agabyada hadda jira, rakibidda la habeeyay ayaa sidoo kale la soo dhaweynayaa. Weligaa miyaad la yaabtay xirxirida iyo agabka la isticmaalayo? Nala soo xiriir hadda wixii talo soo jeedin ah.